कान्तिपथ हाईलाईट : अहिले सम्मका मुख्य समाचार
भारतीय दादागिरी : अछामको आकाशमा लस्करै भारतीय फाइटर विमान !
भारतले नेपालीभूमी मिचेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्दै विरोधमा रहेको बेला अछामको आकाशमा जेट विमान उडाइएका छन् ।
मंगलबार साँझ अछामको आकाशमा लस्करै विमान उडिरहेको देखेपछि स्थानीय सशंकित भएका छन् । केही प्रत्यक्षदर्शीहरुले ३७ जेट विमानहरु लस्करै उडेको बताएका छन् ।
आकाशमा विमान लस्करै उडेको प्रहरीले पनि देखेका थिए । इकालका प्रहरी कार्यालय विनायका असई लक्ष्मण बिकले पनि आकाशमा साँझतिर रकेट जस्तै देखिने गरी लस्करै उडेको बताए ।
नारायणहिटी संग्रहालय स्थापना भएको ११ वर्ष पनि संग्रहालयलाई विकास समिति बनाउने र गणतन्त्र स्मारक, राजा वीरेन्द्रको आवास गृह श्रीसदनलगायत अन्य संरचना अवलोकन गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।
आजको पत्रिकामा : राजा वीरेन्द्रको निजी निवास र गणतन्त्र स्मारक खुला गर्ने तयारी, दरबारमार्गमा सामूहिक बलात्कार
राजधानीबाट बुधलबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाले आज विभिन्न शिर्षकमा प्रमुख समाचार छापेका छन् । यसका साथै पत्रपत्रिकाले विभिन्न फरक – फरक विषयका समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर प्रकाशन गरेका छन् ।
अमेरिका लैजाने भन्दै मलावीमा बन्धक बनाइएका ६ नेपालीको उद्धार
मेरिका लैजाने भन्दै अफ्रिकाको मलावी लगेर बन्धक बनाइएका ६ नेपालीको उद्धार गरिएको छ । मानव बेचविखन अनुसन्धान व्युरोको समन्वयमा उनीहरुको उद्धार भएको हो ।
अफ्ताब आलमलाई मुख्य अभियुक्त किटान गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने राजपुर बमकाण्डका पीडितलाई प्रलोभन र धम्कीमा बयान फेर्न लगाउने कोसिस भएको छ । प्रहरीले घटनाको साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेको घाइतेमध्येका गौरीशंकर राम चमारलाई आलम पक्षले बयान फेर्न दबाब दिएको खुलेको छ ।
‘बिजुलीमा राजनीति’ : कांग्रेसका घर झिलिमिली, कम्युनिस्टका घरमा अन्धकार
एक सय ७७ घरधुरी रहेको जुम्लाको तिला गाउँपालिका–८ जुम्लाकोटमा बिजुली छ । तर, कांग्रेसका घर झिलिमिली हुँदा कम्युनिस्टका घरमा पिलपिले टुकी मात्रै बल्छन् । ०७३ अघिका पाँच वर्षको अवस्था ठीक उल्टो थियो ।
​केटी काण्डवाला कमरेड बिप्लवद्वारा कर्‍याप्पै
सत्ता र विद्रोहीका काममा हत्तपत्त समानता पाइँदैन । तर, त्यस्तै संयोग देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नगरमा २५ तले भ्यु–टावर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा २५ तले ‘भ्यु–टावर’ निर्माण सुरु भएको छ ।
नेकपामा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने अर्को लफडा शुरू
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको गर्न अन्तिम तयारी गरिरहँदा पार्टीभित्र मन्त्री बन्नेको सूचि प्रधानमन्त्री ओलीले तयार पारिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे डायरीमा मन्त्रीहरुको नाम : ‘को–को आउट, को–को इन’
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मन्त्रीमण्डलमा रहेका उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, भूमी व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, ...
भारतकाे मुम्बईमा राष्ट्रपति शासन लगाउन दिल्लीसँग हारगुहार
भारतको महाराष्ट्र राज्यमा राष्ट्रपति शासन लगाउनका लागि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीले दिल्लीलाई सिफारिस गरेका छन् ।
सिमानामा बाटो छैन, सरकारलाई चिन्ता छैन !
कालापानी र लिपुलेकसहितको नेपाली भूभाग राखेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे सँगै यस क्षेत्रमा चर्को विरोध हुन थालेपछि सुदूरपश्चिम मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्रदेश सरकारले छांगरु
बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदको भेटवार्ता आज, को–कोसँग हुने छ भेट ?
नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले आज समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग उच्चस्तरिय भेटवार्ता गर्दै छन्।
बोलिभिया संकट : विपक्षी नेतृले स्वयंलाई घोषणा गरिन् राष्ट्रपति
बोलिभियाकी विपक्षी सांसद जेनी एनेजले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषित गरेकी छिन्। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिभियामा राजनीतिक तनाव चुलिँदै जाँदा राष्ट्रपति इभो मोरालेसले गत आइतबार पदबाट राजीनामा गरेका छन्।
नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक अन्सारीको यस्तो छ दादागिरी
विद्यार्थीहरुसँग बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरुलाई बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न सरकारले तुरुन्त फिर्ता गर्न उर्दी नै जारी गरेका छ । तर मेडिकल कलेजहरु चाही कानमा तेल हालेर सुनेको नसुनेझै बसेको छ ।
यी हुन् 'राष्ट्र बैंक'को सुविधा छाेडेर ‘प्रहरी’मा छिरेका एसएसपी थापा
भक्तपुरको पलाँसे वरिपरि सैनिक अधिकारीका घर छन् । प्रायः जसको घरका कोही न कोही नेपाली सेनाका अधिकृत हुन्थे । फोर्सको त्यो क्रेज थियो उबेला । अहिले पनि छ ।
के अरबौको सम्पति बैध बनाउन क्यासिनो छिरेका हुन् त पूर्व सेनापति ? (प्रमाण सहित)
आफ्नो पालामा भएका हेटौंडा–काठमाडौं फास्टट्रयाक, अस्पताल, जंगी अड्डा र ब्यारेकहरुको निर्माण तथा हवाईजहाज खरिद–बिक्री प्रकरणको रथी शरद गिरी नेतृत्वमा गहन छानबिन चलिरहेका बेला निवर्तमान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री पत्नी रीतासहित अमेरिकी सेनाको ज्याकेट भिरेर किन हलिउडको जुवाघरतिर डुलिरहेका होलान् ? विजय गच्छदारले आफूले प्रयोग गर्ने औषधि किन्दा चिठ्ठा परेर लाखौं डलर हात पारेको चर्चा चलाएकै क्यासिनोमा पैसा जितेको हिसाब निकाल्ने योजना त हैन ? बयान दिइरहेका विकास निर्माणसम्बद्ध प्राविधिक जर्नेलहरु खासखुस गर्दैछन् ।
अवकाश पाउँदै यी ४ एसएसपी, बढुवाकाे हाेडमा काे काे ?
नेपाल प्रहरीमा आगामी डेढ महिनाभित्र चार एसएसपीले अवकाश पाउने भएका छन्। एसएसपीको ५५ बर्षे उमेरहदका कारण आगामी मङ्सिर १९ गते एसएसपी बिरेन्द्र श्रेष्ठ, मङ्सिर २७ गते दिलिप बस्नेतले अवकाश पाँउदैछन्।
एकैपटक ६० उपसचिवको सरुवा, को कहाँ ?
केही समयअघि सहसचिवहरुको व्यापक सरुवा गरेको अर्थ मन्त्रालयले मातहतका ६० उपसचिवको सरुवा गरेको छ ।
आलम पक्षको धम्की : न्यायाधीशको पसीना निकाल्ने, पीडितलाई नगद र खेत दिने !
राजपुर बम विस्फोट र घाइतेहरुलाई ईंटाभट्टामा जलाएको मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मो. अफ्ताब आलमले सरकारी साक्षी एवं मृतकका आफन्तलाई वयान फेर्न आर्थिक प्रलोभन देखाएको प्रमाण भेटिएको छ ।
बाह्र वर्षअघि बम विस्फोटमा घाइते भएका भारत सीतामढीका गौरीशंकर रामलाई आलमका मानिसहरुले अपहरण गरेर बन्धक बनाएको मंगलबार मात्र खुलेको थियो । गौरीशंकरलाई वयान फेरेर कागज गराएपछि आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । यद्यपि उनले आफूलाई अपहरण गरिएको मंगलबार खुलासा गरे ।
यसअघि विस्फोटमा मृत्यु भएकी भनिएकी ओसी अख्तरकी पत्नी अमना खातुनले पनि आफ्ना श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गएको र नफर्किएको भन्दै शुक्रबार अदालतमा वयान फेरेर निवेदन दिएकी थिइन् ।
सरकारी साक्षीका रुपमा रहेका मृतकका आफन्त एवं विस्फोटनका घाइतेदे नै बयान फेर्न (होस्टाइल) चाहेको निवेदन लिएर धमाधम अदालतमा आउन थालेपछि प्रहरीले यसको गुह्य कुरो खोजी गर्दा ३६ मिनेट लामो एउटा सनसनीपूर्ण अडियो रेकर्ड फेला परेको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त उक्त अडियोमा आलमका मानिसहरुले अख्तरको परिवारलाई वयान फेर्न धम्की र प्रलोभन दिएको पाइएको छ । आलमका मानिसहरुले अख्तर परिवारसँग गरेको कुराकानीको ३६.५८ मिनेट लामो अडियोमा अख्तर परिवारलाई वयान फेरेवापत ५ लाख नगद र ५ कठ्ठा खेत दिने प्रलोभन दिइएको छ ।
५ लाख रुपैयाँ र ५ कठ्ठा खेत लेऊ !
आलमलाई मन्त्री भन्दै सम्बोधन गरेका उनीहरुले आफूहरुले धम्की दिएको नभई सल्लाह गर्न आएको बताएका छन् । अख्तर परिवारसँगको भेटघाट र कुराकानीको सुरुमा आलमका मानिसहरु भन्छन्, ‘५ लाखमा हुन्छ ? चित्त बुझे हुन्छ, नबुझे हुँदैन भन्नू, तर कुरा चुपचाप राख्नू ।’
उनीहरु भन्छन्, पहिले त्यहाँ (समसुलको घर, जो अख्तरका ससुरा हुन् र घाइतेहरुलाई ईंटा भट्टामा हालेको देखेको वयान दिने साक्षी हुन्) को वातावरण बुझ्नुपर्‍यो ।’
पीडितबाट ‘हुन्छ’ भन्ने जवाफ नआएपछि उनीहरु अर्को कार्ड फाल्छन्, ५ लाख रुपैयाँ र ५ कठ्ठा खेत लेऊ ।
पीडित परिवारले यो प्रलोभनलाई पनि स्वीकार गर्दैन । त्यसपछि आलमका मानिसहरु भन्छन्, तिमी पाँच लाख, पाँच लाख मात्रै भनिराछौं । तर, पाँच कठा जग्गाको मूल्य पनि हेर न । पाँच कठा जग्गाको मूल्य कति हुन्छ ? केही नभए पनि १२/१४ लाख जग्गाकै मोल हुन्छ । दुई लाख कठ्ठाभन्दा बढीको जग्गा हो ।’
उनीहरु बेलाबेला त्रास पनि देखाउँछन् । ‘यो कुरालाई हल्कारुपमा नलिनू’ भन्दै तर्साउन खोज्छन् । कुराकानीका क्रममा उनीहरु जोखिम लिने कि पैसा र जग्गा स्वीकार गर्ने, दुईमध्ये एक रोज्न दबाव दिन्छन् ।
‘आलमलाई सजायँ गराएर तिमीलाई के फाइदा हुन्छ ? फाइदा हुन्छ शैलेन्द्र र किरणलाई (दुवै राजपुरमा आफताबका प्रतिद्वन्द्वी हुन्) ।’ उनीहरुले अख्तर पारिवारका सदस्यहरुलाई लोभ र त्रास दुबै देखाउँदै भनेका छन्, ‘यो (रकम र जग्गा) लियो भने २/४ पैसा त आयो ।’
अघि भन्छन्, ‘आफताब (आलम) छुट्यो भने गाउँ, समाज र जिल्लामा हामीलाई राम्रो हुन्छ । जे भए पनि एकचोटिका लागि माफ गर्दिनुपर्छ । तिमी मुसलमान हो कि होइन ?’
अख्तरका परिवारका सदस्य भन्छन्, ‘मुसलमान भन्नुहुन्छ, मुसलमानको कुरा गर्नुहुन्छ । तर, मुसलमान मरेपछि सदगद गर्दा माटो दिनुपर्छ । कमसेकम शव त दिनुपथ्र्यो नि ? शव पनि दिएन । त्यसकै फल उसले (आलम) पाएको छ ।’
‘माटो दिन पाएनौ भने त्यसको सजायँ अल्लाहले तिमीलाई दिन्छ कि उसलाई ? आलमका मानिसहरुले प्रतिप्रश्न गरे । त्यसपछि अख्तरका परिवारले पनि प्रश्न गरे, तपाईको आफन्तलाई त्यस्तो गरेको भए तपाईले (अहिले भने जस्तो) गर्नुहुन्थ्यो ? उ आफैं गएको थिएन, उसलाई त्यहाँ लगिएको थियो ।’
त्यसपछि भने आलमका मानिसहरु रिसाउँछन् । ‘धेरै बहस नगर र तिमी बुवा (समुसल मिया) लाई सल्लाह देऊ । जे राम्रो हुन्छ, त्यही गर्न भन ।’
कुराकानीका क्रममा उनीहरुले कहिले फकाएको जस्तो गर्छन् त कहिले धम्क्याउँछन् ।
‘आज बाघ पिँजडामा छ । गल्ती गरेको छ । हामी उसको अगाडि कमिला हौं । तिमीले अलिकति रहम गरिदेऊ । मन्त्रीको छोरा डाक्टर छ, मेरो बुवाबाट गल्ती भयो भन्दै उ खुट्टा समातेर रोइरहेको छ । समसुल (ओशी अख्तरका ससुरा) निर खुट्टा समातेर रुन्छ । ‘वास्तवमा आलमको आसेपासेले खराब गर्‍यो’ वीचैमा एकजना बोलेको सुनिन्छ ।
यो राजनीतिकरण मुद्दा भएको भन्दै आलमका मानिसहरुले वयान फेर्न आग्रह गर्छन् । रेकर्डमा उनीहरुले भनेका छन्, तिमीले अदालतमा बोल्ने त हो नि । यो भने पनि, त्यो भने पनि । आमनाले गवाही दिने न हो । उसले भन्नुपर्‍यो, आफताबजीले गरेको होइन, उनको त्यसमा कुनै हात छैन । वयान गर्नेले हो वा होइन भन्नुपर्छ ।’
तर, पीडित परिवारका सदस्यले भने आफूलाई पैसाको लोभ नभएको र मृतककी पत्नी आमनाले पनि यो विषय थाहा नभएको बताउने गरेको सुनाए ।
आलमका मानिसहरु धम्कीमिश्रति भाषामा भन्छन्, छुटोस् या नछुटोस् त्यो कुरा होइन । उसले (आमना) यो घटना मलाई थाहा छैन भन्नुपर्छ । सासूले सुनाएपछि मैले थाहा पाएँ भन्नुपर्छ । त्यसपछि हामी सिस्टममा ल्याउँछौं ।’
उनीहरु न्यायाधीशको पसिना निकालिदिने र आलम छुट्ने भन्दै पीडित परिवारलाई प्रभावित पार्ने अनेक प्रयास गर्छन् ।
झण्डै २० मिनेट लामो दबाव र प्रलोभनयुक्त कुराकानीपछि पीडित परिवारका सदस्य केही गलेको अडियो सम्वादमा बुझिन्छ । उनी भन्छन्, अहिले म केही भन्दिनँ । काम भएपछि तपाईलाई जे विचार छ गर्नुहोला । सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस् ।’
तर, आलमका मानिसहरु अझै ढुक्क हुँदैनन् । ‘भोलि बाटोमा हिँडिरहँदा केही होला, मोटरसाइकलले ठोकिदेला, केही हुन सक्छ’ भन्दै पीडित परिवारलाई त्रास देखाउँछन् ।
त्यसपछि पीडित परिवारले बल्ल मुख खोल्छ, ‘त्यसोभए अलिकति अझै थपिदिनुस् ।’
त्यसमा आलम पक्ष सहमत हुन्छ । तर, उनीहरुले लिखित नगर्ने भन्दै विश्वास गर्न आग्रह गर्छन् ।
त्यसपछि उनीहरुले आलमको प्रशंसा गर्छन् ।
‘उ बाघ हो । जेसुकै गरे पनि हामीलाई उसमा गर्व छ’ उनीहरु भन्छन्, ‘आलमको दोष छैन । महताबको दोष छ, गफुर र फजिउल्लाहको दोष छ । आफताब निर उनीहरुले भनेका थिए ‘काम हो गया, कोई बात नही हैं, आप टेन्सन नही लिजिए ।’
कुराकानीको अन्त्यतिर आलमका मानिसहरुले अरुका कुरा नसुन्न र यो आपसी सहमतिमा सल्टाउनुपर्ने बताउँछन् । पीडित पक्षले भने प्रहरीले समाउने हो कि भन्ने डर पोख्छन् ।
तर, आलमका मानिसहरु ‘प्रहरीले केही गर्दैन’ भन्दै फकाउँछन् । ‘सम्धिनीले (रोक्साना खातुन) जाहेरी दिएकी हुन् । उनी मरिसकिन् । अब कसलाई समात्छ ?’ आलमका मानिसहरुले भन्छन्, ‘आमनाले मन भयो भने वयान दिन्छ, नभए दिँदैन । न्यायाधीशको सामुन्ने जाहेरीमा के बोलेको छ, मलाई थाहा छैन भन्नुपर्छ ।’
यो सम्वाद भएको केही दिनपछि अख्तरकी पत्नीले आफ्ना पति बम विस्फोटमा मारिएको नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएको र नफर्किएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएकी हुन् ।
तर, न्यायाधीशले थुनछेक बहसका क्रममा भने आमनाको निवेदनलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।
लिग लिडर युभेन्टसको लज्जास्पद हार
ब्राजिलका राष्ट्रपतिलाई पनि कोरोना संक्रमण